20 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ 20 2013
ဗန် OSB မီးရထားရထားကူရှင်ချုပ်လုပ်ငန်း
တရားမျှတရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပါတီ (AK ပါတီ) ဗန်လက်ထောက် Mustafa ပရောဖက်, ဗန်ပိုပြီးအကျိုးရှိအနေအထားအတွက်လေ့လာမှုများဖွဲ့စည်းထားခြင်းစက်မှုဇုံကနေဘူတာရုံမှမီးရထားလိုင်းပြသသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, ဒေသတွင်း၌ xnumx'nc ကြောင့်မက်လုံးပေးကနေအကျိုးရှိမည်သူကို ... [ပို ... ]
Erciyes သည်အမြန်လမ်းမကြီးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ Erciyes သည် Master Plan ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏မူဘောင်တွင်ကျင်းပမည့်တင်ဒါ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် 20 နေရာထိုင်ခင်းမြေနေရာကိုရောင်းသည်။ Kayseri Metropolitan Municipality မှပိုင်ဆိုင်သော Erciyes Mountain Kabaktepe, Erciyes Master Plan ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏မူဘောင်အတွင်း [ပို ... ]
İZBANပင်သွားသတိရလာသောအသီးအသီးပြဿနာများ၏ရှေ့နိုင်ငံသားများရင်ဆိုင်ရကြောင်းဆုယူဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်သောအခါ, အလွန်စိတ်သက်သာရာ TCDD ပူးတွဲစီမံကိန်းများနှင့်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူမြူနီစီပယ်နှင့်အတူ Izmir မြို့တော်အပေါ်İZBANလိုင်းခေါငျးမာသေ [ပို ... ]
Isparta အလင်းရထားစနစ်ကနောက်တဖန် Isparta များအတွက်အကြံပြုချက်များအားဖြင့်ပုံဖော်မည် 1 / 25000-စကေးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး Master Plan ကိုရဲ့အရေးပါသောအအကြံပြုပါသည်။ အသစ်ကအစီအစဉ်Gülşen Cengiz Bozkurt ပြင်ဆင်သောကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်, အရင်းအမြစ်များနှင့် Isparta အတွက်ရေကန်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူအထူးသဖြင့်သူတို့အား [ပို ... ]
ကြောင့်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အလုပ်အများဆုံးလမ်းများမှမြေအောက်အလုပ်3နှစ်ပေါင်းပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်
အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အလုပ်အများဆုံးလမ်းများ Umraniye ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောမြေအောက်အလုပ်နယ်ပယ်Alemdağရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ကြောင့်3နှစ်မြေအောက်အလုပ်ပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်, မေလကတည်းက 26 2013 နှစ်ပေါင်း3နှင့်အတူယာဉ်အသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အလုပ်အများဆုံးလမ်းများတစ်ဦးအဖြစ် [ပို ... ]
Raybüsမကြာမီ Sivas ၌ဖြစ်လိမ့်မည်
Raybüsမကြာမီအဖြစ်မကြာမီသငျသညျထိုမွို့ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်raybüအဖြစ်စီစဉ်ထားတို့အကြား Sivas AK ပါတီ Sivas လက်ထောက် Mesude Nursuna Memcan, Sivas-Kangal-Divrigi operate ။ ၌ဖြစ်လိမ့်မည် Memecan ကြောင်းဤအမှုအပေါ်, raybüsခရီးသွားကာလအတွင်းအလုပ်လုပ်ဆက်လက်ညွှန်ပြ [ပို ... ]
မသန်စွမ်း Garda မာရသွန် | Eskisehir (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
Garda မသန်စွမ်း Eskisehir အတွက်မသန်စွမ်းများအတွက်မာရသွန်ရထားခရီးနီးပါးမှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်တစ်ခုအိပ်မက်ဆိုးသို့လှည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အသစ်ကဘူတာရုံအဆောက်အဦးအနေဖြင့်အလုပ်Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထားနယ်ပယ်မှာ, ခကျခဲတဲ့ခရီးစေရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့်မသန်စွမ်းများအတွက်ယာယီပလက်ဖောင်းလုပ် [ပို ... ]
ဒါကDüzcedမြန်ရထားဘူတာရုံDüzcedအရေးကြီးသော duzceli တူရကီအစည်းအရုံးကသမ္မတ Semih ဆိုက်ပရပ်စ်မဟုတ်ဘဲဘူတာရုံDüzceဖြတ်သန်း high-speed ကိုရထားထက်မပိုင့်, ကDüzceအတွက်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ် "ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းကြောင်းDüzceပေါ်တွင်အစီအစဉ်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ [ပို ... ]
မေလUzungöl'deနူးညံ့ ropeway စီမံကိန်းတွင်အဆိုပါကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုတူရကီရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုဘဝမှလာမယ့်ခရီးသွားများ၏မတူကွဲပြားတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ဒါးဗို့အတွက်Uzungöl'deကိုပြင်ဆင်စေခြင်းငှါထွက်လှည့်။ ဆောင်းတွင်းလအတွင်းနွေရာသီခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာမရှိတော့Uzungöl'deစဉ်အတွင်းဒေသတွင်း၌ခရီးသွားဧည့်များ၏ရောက်လာ [ပို ... ]
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim, xnumx.havalim တင်ဒါအသစ်အတွက်တူရကီရဲ့အကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ညွှန်ပြပါ "ဟုနိုင်ငံများအကြားပြီးသားတူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဒီဆရာမမှတ်စုလျစ်လျူရှုတဲ့ကိစ္စခဲ့ရာ၌ခန့်ထားပြီဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့မိမိတို့လောကတူရကီမဟုတ်ပါဘူး [ပို ... ]
Erciyes နှင်းလျှောစီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ကိုစောင့်နေအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ: နု 20 နေရာထိုင်ခင်းအောက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏မူဘောင်အတွင်းကျင်းပလိမ့်မည်သည့် Erciyes Master Plan ကိုတပြည်လုံးကိုရောင်းချပါတယ်။ Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Kabaktepe အတွက်တောင်ကို Erciyes ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏မူဘောင်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် Erciyes Master Plan ကို [ပို ... ]
RayHaber 20.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
Hemzemin Geçit Malzemesi Satın Alınacaktır Muratbağı İstasyonu Saha Aydınlatması İşi Benzer Demiryolu Haberleri ve İlginizi Çekebilecek Diğer HaberlerRayHaber 02.01.2013 တင်ဒါသတင်းလွှာ 02 / 01 / 2013 Baga Coupler Spacer တင်းမာမှု Shaft Piston Gupilya 68 ဘောပင် (TÜVASAŞ)RayHaber 03.01.2013 လေလံ [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအစ္စတန်ဘူလ်က Metro မှာကိုလက်စသတ်လိမ့်မည်: မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေးအစ္စတန်ဘူလ်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာဆက်လက်ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံးမြို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများအဖြေတစ်ခုအဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်အတွက်စီစဉ်ထားဆောက်လုပ်ရေးစွန့်ပစ်,52006 မက်ထရိုလိုင်းနှင့်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköyမြေအောက်ကတည်းကပြီးစီးခဲ့မရနိုင် [ပို ... ]
ရထားလမ်းများအတွက် Bayburt လိုအပ်ချက်!
Bayburt စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအသင်း (BAYMED) ကသမ္မတ Jahangir ကြယ်, Bayburt ကနေရထားလမ်းဖြတ်သန်းထက်ဝက်ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုလျှင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စ။ သဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကဏ္ဍ Bayburt ရန်၎င်း၏အလှူငွေအပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်ထဲမှာစီစဉ်ထား Trabzon Erzincan ရထားလမ်းစီမံကိန်းများ၏အရှေ့ပိုင်းပင်လယ်နက်ဒေသဖြတ်သန်း [ပို ... ]
xnumx.havalim တင်ဒါအသစ်အတွက်တူရကီရဲ့အကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ညွှန်ပြပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim, "ဟုအဆိုပါနိုင်ငံများအကြားပြီးသားတူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကဒီဆရာမှတ်စုများလျစ်လျူရှုတဲ့ကိစ္စခဲ့ရာ၌ခန့်ထားပြီဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့မိမိတို့လောကတူရကီမဟုတ်ပါဘူး [ပို ... ]
Smyrna ဗလီနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားလာမယ့်! Gulab မြို့တော်ဝန် Ridvan Karakayalı, Gulab မှဗလီနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစီမံကိန်းအတွက်ကပြောသည်။ ခေတ်မီဗလီများနှင့်သူတို့၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် Izmir Kemalpasa မှားယွင်းသောဖြစ်သက်သေပြသည့်စီးတီးကောင်စီမဲခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုယူ [ပို ... ]
Bursa တဲ့ Metropolitan ပြီးစီးခဲ့သည့်မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့်မြို့ရဲ့အရှေ့ဖို့ projected Bursaray Kestel ချောမွေ့စွာနှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေ့ဆုံရန်လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေး၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကသံလမ်းကိုတင်သောစတင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altepe ကြည့် site ၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ်အတွက်Şirinevlerဘူတာရထားလမ်း, ဘူတာရုံ [ပို ... ]
Gulab မြို့တော်ဝန် Ridvan Karakayalı, Gulab မှဗလီနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစီမံကိန်းအတွက်ကပြောသည်။ Izmir Kemalpasa ခေတ်မီဗလီ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သူတို့ကစီးတီးကောင်စီမဲခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ယူ. ဆုံးဖြတ်ချက်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံကြောင်းဖော်ပြထားသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတအတည်ပြုထံမှမမှန်သောဖြစ်သက်သေပြ [ပို ... ]
Alayunt ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကအမှုကိုပြုခံရဖို့
Alayunt ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကဆွဲဆောင်မှုများ: Kütahyaလက်ထောက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ပို့ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များစင်တာအမှုကိုပြုခံရဖို့ Vural Kavuncu Alayunt ပြည်နယ်မီးရထား, သူတို့အလုပ်ဆက်လက်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Kütahyaလက်ထောက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Vural Kavuncu Alayunt ပြည်နယ်မီးရထား, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာလုပ် [ပို ... ]